Iwe unogona kundiudza sei kuti uwane EDU backlinks?
Ndave ndiri mubazi re Search Engine Optimization kwemakore anenge mashanu atove. Uye ini ndinonzwisisa kukosha kwekunzwisisa kwakanaka kuwana EDU backlinks. Ndicho chikonzero munhaurirano iyi ndiri kukuratidza hurongwa hunopera kuti upe hufambiro hunokosha kune webhusaiti yako kana blog. Iri sangano riri kutengesa kunyanya pamusoro pezvidzidzo, uye chaizvoizvo zviri kutendera munhu wese kuti awanire avo vakanyatsodzidza masangano ekudzidzisa pasina kubhadhara penny, zvichida zvakananga. Saka, pasi apa ndichakuratidza nzira yekuwana EDL backlinks nemutungamiri nhanho-nhanho Ive ichangobva kuongororwa mukati mangu kuti ndigadzire mhemberero yangu yezvikamu 15 kune dzimwe nzvimbo dzekudzidzisa kuburikidza nenguva yemwedzi miviri kana mitatu. Hongu, Yakanga iri basa rinopedza nguva, asi richaramba richibhadhara.
Nzira yekuwana nayo EDU Backlinks - Practical Guide
Nhamba 1: Kusarudza Tarudzo Yakarurama
Tisati tatanga, ngatitarisei - kusarudza vavariro yakakodzera nevateereri uye niche yakakosha inokosha zvakakosha kwete kungofanana nemasikirwo emashure, asi kunzwisiswa kwakarurama pamusoro pekuwana EDU backlinks uye kutanga kufamba nenzira yakarurama kubvira pakutanga. Ndinoreva kunyange kana zvichiita sekunzwisisika mapurogiramu edzidziso yekubatanidza kusimbisa iwe uchave uchiziva kuziva chinangwa chako chevanhu, icho chinofanira kuva chakakosha zvikuru pane zvewebsite yako kana blog. Kuisa muChirungu Chinyorwa, zvose zvaunotanga kutanga kutora vateereri vevadzidzi. Paunenge uchienda kune mamwe mabasa anokosha ekudzorera shure, iva nechokwadi chokuti vachava nehanya zvikuru muchirongwa chedu chekudzidza.
Chidzidzo 2: Kugadzira Scholarship Page
Zvadaro, unofanira kushanda pane peji rako rekudzidzira. Kunyange zvazvo pane basa rakajeka kuumba rudzi urwu rwehuwandu, pano pane dzimwe nhovo dzekuti iwe uzvinyatsocherechedza. Iva nechokwadi chokuti une zvinhu zvose zviri munzvimbo yeiyo inotevera:
Tsanangudzo yekambani - ita kuti iite shoma ichiri kuzadza zvizere, chimwe chinhu chakadai ". "Zvadaro, zvibatanidze mukati mawo kuenda kumba kwako, pamwe chete nezvimwe zvikamu zvakakosha kuti upfuure jisi.
Kukodzera - iwe unofanirwa kuita zvinhu zvose sezvaunofanirwa nevana vako vavanotarisira sezvinobvira. Ita chokwadi chekufunga kana vane nguva yakazara kana yega-nguva, nguva ipi zvayo yakakosha panyaya yako huru, iyo nyika (guta, kana kuti nzvimbo) iyo inowanzobva, etc.
Kukosha kwemari - zvechokwadi, mari yekubhadhara zvakanyanya inobva pane bhadha yako yekuvaka bhadha. Asi ini, ini ndinokurudzira kuisa iyo inenge madhora ane chiuru. Kana zvisina kudaro, zvingave zvakakundikana kukwezva chero zvipi zvidzidzo zvidzidzo zvidzidzo uye zvidzidzo zvavo.
Mazano ekushanda - zvose zvaunoda pano ndezvokuumba chikamu chakajeka uye chinonzwisisika. Zviri kuitika kuti fomu yako yepamusoro yekushandiswa ishandiswe nevose vanobvumirana nekuzviisa pasi purogiramu yekudzidzira. Nenzira iyo, iva nechokwadi chekutsanangura nguva yakatarwa uye zuva remaropafadzo.
Nhamba yechitatu: Kutarisira mikana
Kana ini, kutarisira mikana yakawanda yemikana dzidziso yekuvaka chivako ndakashandisa Excel spreadsheet. Nenzira iyo, ndaigona kubata zvakanyatsotarisa mabasa angu ose nekudzidzira mazano pejiji, ukama hwehukama, zita, email kero, domains, mazwi, etc. Izvozvo zvingaita kuti zvinhu zvive nyore!
Chidzidzo chechina: Kuzadza zvakabuda
Pakupedzisira, kuti uwane ruzivo rwakakwana rwekuti ungawana sei EDL backlinks, uchafanira kupedzisa kusvika. Uye pano iwe unofanirwa kuita zvisizvo uye kushanda zvakaoma kuti ugone kuwana munhu akakodzera. Yeuka, masunivhesiti ose uye makoroji akawana vamwe vashandi vanoita basa kuti vataure navo. Saka, zvose zvaunoda ndezvokuita email yakasimba template uye kutumira mapepa kune avo vanhu vachitarisira mhinduro yakanaka. Kana zvangoitika, iwe unofanira kungotumira zvinyorwa zvepurogiramu yako yekudzidzira, kana kuzadza-mune imwe chimiro chinopiwa nechikoro chekudzidzisa Source .